ယူနိုက်တက်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြသနာက ဘာလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားတဲ့ လီဗာပူး ဂန္ဓဝင် #ကာရေဂါ - SPORTS MYANMAR
ယူနိုက်တက်ရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြသနာက ဘာလဲ ဆိုတာ ထုတ်ဖော် ပြောကြားသွားတဲ့ လီဗာပူး ဂန္ဓဝင် #ကာရေဂါ
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ကတော့ ဒီ ရာသီ မှာ အနိုင် ရလဒ် ရယူ နိုင်ရေး နဲ့ ပတ်သက် လို့ ယုံကြည် စိတ်ချ ရဖွယ် ကောင်းလှတဲ့ ခြေစွမ်း မျိုး မပြသ နိုင်ခဲ့ သေး ပါဘူး ။ အခုတော့ လီဗာပူး အသင်း ရဲ့ ဂန္ဓဝင် ကစားသမား ဟောင်း ဖြစ်သူ ဂျေမီ ကာရေဂါ က ယူနိုက်တက် ရဲ့ ဒီ ရာသီ အဓိက ပြသနာ က ဂိုးတွေ မသွင်းယူ နိုင်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ဖော် ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ဒီ ရာသီ ပွဲစဉ်5ပွဲ အထိ ကစား ထားခဲ့ ပြီး2ပွဲ နိုင် ၊2ပွဲ သရေ ၊ 1 ပွဲ ရှုံး ရလဒ် နဲ့ အတူ ပရီးမီးယား လိဂ် အမှတ်ပေး ဇယား အဆင့်5နေရာ မှာ ရမှတ် 8 မှတ် နဲ့ အတူ ရပ်တည် နေခဲ့ ရ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် ကစား ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ5ပွဲမှာ 8 ဂိုးသာ သွင်းယူ ထားနိုင် ခဲ့ပါ သေးတယ် ။
အခြား တစ်ဖက် မှာတော့ အမှတ်ပေး ဇယား ကို ဦးဆောင် ထား ကြတဲ့ လီဗာပူး နဲ့ မန်စီးတီး အသင်း တွေက 15 ဂိုး ၊ 16 ဂိုးစီ သွင်းယူ ထားခဲ့ ကြပြီး ထက်မြက် တဲ့ တိုက်စစ် ကစားဟန် ကို ပြသ ထားနိုင် ခဲ့ကြ ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် အခြား ပြိုင်ဖက် အသင်း တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ တော့တင်ဟမ် နဲ့ ချဲလ်ဆီး တို့ဟာ လည်း 11 ဂိုးစီ သွင်းယူ ထားခဲ့ ကြ ပါတယ် ။
ဒါပေမယ့် ယူနိုက်တက် ခံစစ် ကတော့ ကောင်းမွန် တဲ့ ကစား ကွက်နဲ့ အတူ ပရီးမီးယား လိဂ်ရဲ့ ခံစစ် အကောင်းဆုံး အသင်း တစ်သင်း အဖြစ်4ဂိုးသာ ပေးထား ခဲ့ရ ပါ သေးတယ် ။ ဒါပေမယ့် ကာရေဂါ က တိုက်စစ်ပိုင်း မှာ ဂိုးတွေ သွင်းယူ နိုင်မှု မရှိ ခြင်းက ခံစစ် ကစားသမား တွေ အတွက် ဖိအား တွေကုို ဖြစ်ပေါ် စေနိုင် တယ်လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
” မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အတွက် တော့ ကြီးကျယ် လှတဲ့ အနေအထား မျိုး မဖြစ် ခဲ့သေး ပါဘူး ။ သူတို့ တိုက်စစ် မှာ သွင်းဂိုး တွေကို မြင်တွေ့ ရဖို့ ခက်ခဲ နေခဲ့ ပါတယ် ။ အဲ့တာက ကြီးမား လှတဲ့ ပြသနာ တစ်ခု ပါပဲ ။ အဲ့တာ တွေက အဝေးကွင်းမှာ Clean Sheet ရရှိ ဖို့ ရုန်းကန် ရမှု တွေကို ဖြစ်ပေါ် စေခဲ့ ပါတယ် ”
” အသင်း တစ်သင်း ရဲ့ တိုက်စစ် ပိုင်းမှာ ဂိုးတွေ ရရှိ နိုင်ဖို့ ရုန်းကန် နေရ ခြင်းက အဲ့ဒီ အသင်း ရဲ့ ခံစစ် ကစားသမား တွေနဲ့ ဂိုး သမား ဖြစ်သူ တွေကို ကြီးမား တဲ့ ဖိအား တွေ ပိုမို ဖြစ်ပေါ် စေနိုင် ပါတယ် ”
” အကယ်လို့ လုံလောက် တဲ့ ဂိုးတွေ မသွင်းယူ နိုင်ဘူး ဆိုရင် သူတို့ ရှိနေ လိုတဲ့ နေရာ တစ်ခု ဆီကို ရောက်ရှိ နိုင်ပါ့ မလား ? သူတို့ အတွက် ကတော့ ဒီ ရာသီ အတွင်း အိမ်ကွင်း မှာထက် အဝေး ကွင်းမှာ ဂိုးတွေ သွင်းယူ နိုင်ဖို့ ဆိုတာ ပိုပြီး ခက်ခဲ တဲ့ အရာ တစ်ခု ဖြစ်လာ ခဲ့ရ ပါတယ် ” လို့ ကာရေဂါ က ပြောကြား သွားခဲ့ လိုက် ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်း ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နွေ အပြောင်း အရွှေ့ တုန်းက အသင်း ရဲ့ အထောင် တိုက်စစ်မှူး တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ ရိုမီလူ လူကာကူ ကို အီတလီ ထိပ်သီး ကလပ် ဖြစ်တဲ့ အင်တာ မီလန် အသင်း ဆီ ပေါင် 73 သန်း ဝန်းကျင် နဲ့ ရောင်းချ ဖြစ်ခဲ့ ပါတယ် ။
ဒါ့ကြောင့် ဒီ ရာသီ ယူနိုက်တက် အသင်း ရဲ့ တိုက်စစ် မှာ စစ်မှန် တဲ့ တိုက်စစ် ကစားသမား တစ်ဦး တစ်ယောက် မှ ရှိ မနေ တော့ပဲ တောင်ပံ တိုက်စစ် ကစားသမား တွေ ဖြစ်ကြ တဲ့ မားကပ်စ် ရပ်ရ်ှဖို့ နဲ့ အန်သိုနီ မာရှယ် တို့ အပေါ် ဂိုးသွင်း နိုင်ရေး ဖိအား တွေဟာ အဓိက ကျရောက် ခဲ့ရ ပါတယ် ။
လက်ရှိ အချိန် မှာတော့ အန်သိုနီ မာရှယ် ဟာ ဒဏ်ရာ ပြသနာ ကြောင့် ကုသ မှု ခံယူ ရင်း အနားယူ နေခဲ့ ရတဲ့ အချိန် တိုက်စစ် မှာ ဂိုးတွေ သွင်းယူ နိုင်ရေး ဖိအား တွေဟာ အသက် 21 နှစ်သာ ရှိနေ သေးတဲ့ မားကပ်စ် ရပ်ရ်ှဖို့ အပေါ် အပြည့် အဝ ကျရောက် နေခဲ့ ရ ပါတယ် ။
ယူနိုကျတကျရဲ့ အကွီးမားဆုံး ပွသနာက ဘာလဲ ဆိုတာ ထုတျဖျော ပွောကွားသှားတဲ့ လီဗာပူး ဂန်ဓဝငျ #ကာရဂေါ
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ကတော့ ဒီ ရာသီ မှာ အနိုငျ ရလဒျ ရယူ နိုငျရေး နဲ့ ပတျသကျ လို့ ယုံကွညျ စိတျခြ ရဖှယျ ကောငျးလှတဲ့ ခွစှေမျး မြိုး မပွသ နိုငျခဲ့ သေး ပါဘူး ။ အခုတော့ လီဗာပူး အသငျး ရဲ့ ဂန်ဓဝငျ ကစားသမား ဟောငျး ဖွဈသူ ဂမြေီ ကာရဂေါ က ယူနိုကျတကျ ရဲ့ ဒီ ရာသီ အဓိက ပွသနာ က ဂိုးတှေ မသှငျးယူ နိုငျခွငျး ဖွဈကွောငျး ထုတျဖျော ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ဒီ ရာသီ ပှဲစဉျ5ပှဲ အထိ ကစား ထားခဲ့ ပွီး2ပှဲ နိုငျ ၊2ပှဲ သရေ ၊ 1 ပှဲ ရှုံး ရလဒျ နဲ့ အတူ ပရီးမီးယား လိဂျ အမှတျပေး ဇယား အဆငျ့5နရော မှာ ရမှတျ 8 မှတျ နဲ့ အတူ ရပျတညျ နခေဲ့ ရ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ ကစား ခဲ့တဲ့ အဆိုပါ5ပှဲမှာ 8 ဂိုးသာ သှငျးယူ ထားနိုငျ ခဲ့ပါ သေးတယျ ။
အခွား တဈဖကျ မှာတော့ အမှတျပေး ဇယား ကို ဦးဆောငျ ထား ကွတဲ့ လီဗာပူး နဲ့ မနျစီးတီး အသငျး တှကေ 15 ဂိုး ၊ 16 ဂိုးစီ သှငျးယူ ထားခဲ့ ကွပွီး ထကျမွကျ တဲ့ တိုကျစဈ ကစားဟနျ ကို ပွသ ထားနိုငျ ခဲ့ကွ ပါတယျ ။ ဒါ့အပွငျ အခွား ပွိုငျဖကျ အသငျး တှေ ဖွဈကွ တဲ့ တော့တငျဟမျ နဲ့ ခြဲလျဆီး တို့ဟာ လညျး 11 ဂိုးစီ သှငျးယူ ထားခဲ့ ကွ ပါတယျ ။
ဒါပမေယျ့ ယူနိုကျတကျ ခံစဈ ကတော့ ကောငျးမှနျ တဲ့ ကစား ကှကျနဲ့ အတူ ပရီးမီးယား လိဂျရဲ့ ခံစဈ အကောငျးဆုံး အသငျး တဈသငျး အဖွဈ4ဂိုးသာ ပေးထား ခဲ့ရ ပါ သေးတယျ ။ ဒါပမေယျ့ ကာရဂေါ က တိုကျစဈပိုငျး မှာ ဂိုးတှေ သှငျးယူ နိုငျမှု မရှိ ခွငျးက ခံစဈ ကစားသမား တှေ အတှကျ ဖိအား တှကေုို ဖွဈပျေါ စနေိုငျ တယျလို့ ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
” မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အတှကျ တော့ ကွီးကယျြ လှတဲ့ အနအေထား မြိုး မဖွဈ ခဲ့သေး ပါဘူး ။ သူတို့ တိုကျစဈ မှာ သှငျးဂိုး တှကေို မွငျတှေ့ ရဖို့ ခကျခဲ နခေဲ့ ပါတယျ ။ အဲ့တာက ကွီးမား လှတဲ့ ပွသနာ တဈခု ပါပဲ ။ အဲ့တာ တှကေ အဝေးကှငျးမှာ Clean Sheet ရရှိ ဖို့ ရုနျးကနျ ရမှု တှကေို ဖွဈပျေါ စခေဲ့ ပါတယျ ”
” အသငျး တဈသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ ပိုငျးမှာ ဂိုးတှေ ရရှိ နိုငျဖို့ ရုနျးကနျ နရေ ခွငျးက အဲ့ဒီ အသငျး ရဲ့ ခံစဈ ကစားသမား တှနေဲ့ ဂိုး သမား ဖွဈသူ တှကေို ကွီးမား တဲ့ ဖိအား တှေ ပိုမို ဖွဈပျေါ စနေိုငျ ပါတယျ ”
” အကယျလို့ လုံလောကျ တဲ့ ဂိုးတှေ မသှငျးယူ နိုငျဘူး ဆိုရငျ သူတို့ ရှိနေ လိုတဲ့ နရော တဈခု ဆီကို ရောကျရှိ နိုငျပါ့ မလား ? သူတို့ အတှကျ ကတော့ ဒီ ရာသီ အတှငျး အိမျကှငျး မှာထကျ အဝေး ကှငျးမှာ ဂိုးတှေ သှငျးယူ နိုငျဖို့ ဆိုတာ ပိုပွီး ခကျခဲ တဲ့ အရာ တဈခု ဖွဈလာ ခဲ့ရ ပါတယျ ” လို့ ကာရဂေါ က ပွောကွား သှားခဲ့ လိုကျ ပါတယျ ။
မနျခကျြစတာ ယူနိုကျတကျ အသငျး ဟာ ပွီးခဲ့တဲ့ နှေ အပွောငျး အရှေ့ တုနျးက အသငျး ရဲ့ အထောငျ တိုကျစဈမှူး တဈဦး ဖွဈတဲ့ ရိုမီလူ လူကာကူ ကို အီတလီ ထိပျသီး ကလပျ ဖွဈတဲ့ အငျတာ မီလနျ အသငျး ဆီ ပေါငျ 73 သနျး ဝနျးကငျြ နဲ့ ရောငျးခြ ဖွဈခဲ့ ပါတယျ ။
ဒါ့ကွောငျ့ ဒီ ရာသီ ယူနိုကျတကျ အသငျး ရဲ့ တိုကျစဈ မှာ စဈမှနျ တဲ့ တိုကျစဈ ကစားသမား တဈဦး တဈယောကျ မှ ရှိ မနေ တော့ပဲ တောငျပံ တိုကျစဈ ကစားသမား တှေ ဖွဈကွ တဲ့ မားကပျဈ ရပျရျှဖို့ နဲ့ အနျသိုနီ မာရှယျ တို့ အပျေါ ဂိုးသှငျး နိုငျရေး ဖိအား တှဟော အဓိက ကရြောကျ ခဲ့ရ ပါတယျ ။
လကျရှိ အခြိနျ မှာတော့ အနျသိုနီ မာရှယျ ဟာ ဒဏျရာ ပွသနာ ကွောငျ့ ကုသ မှု ခံယူ ရငျး အနားယူ နခေဲ့ ရတဲ့ အခြိနျ တိုကျစဈ မှာ ဂိုးတှေ သှငျးယူ နိုငျရေး ဖိအား တှဟော အသကျ 21 နှဈသာ ရှိနေ သေးတဲ့ မားကပျဈ ရပျရျှဖို့ အပျေါ အပွညျ့ အဝ ကရြောကျ နခေဲ့ ရ ပါတယျ ။